Wednesday September 08, 2021 - 17:56:46 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xiisada siyaasadeed iyo kuwa colaadeed ayaa ka aloosan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kuwaas oo udhaxeeya madaxda ugu sarrasa dowladda.
Boqolaal askari oo daacad u ah R/wasaare Rooble ayaa maanta barqadii gudaha usoo galay gobolka Banaadir waxaana la sheegay in ay ku lug leeyihiin arrimaha siyaasadda ee murugsan.
Rasaas xooggan ayaa maanta duhurkii laga maqlay dhanka xarunta hay'adda sirdoonka DF-ka ee loo yaqaan Habar Khadiijo, rasaasta ayaa la sheegay in ay ridayeen ciidamo daacad u ah Fahad Yaasiin.
Gaadiid iyo ciidamo aad u hubaysan ayaa lasoo tubay afaafka hore ee xarunta sirdoonka, ilo wareedyo ayaa sheegaya in Yaasiin Fareey oo Farmaajo uu xalay magacaabay uu xilka kala wareegay Fahad Yaasiin.
Ciidamo kale oo daacad u ah Rooble ayaa iyana kaabiga ku haya xarunta NISA, warar soo baxay ayaa sheegaya in maleeshiyaad kasoo horjeedo siyaasadda Farmaajo ay saldhigyo ka sameysteen meel aan sidaas uga fogeyn xarunta sirdoonka.
Khilaafka udhaxeeya Farmaajo iyo R/wasaarihiisa ayaa cirka iskusii shareeraya, mas'uul sarsare oo baraha bulshada qoraallo soo dhigay ayaa sare usii qaaday dhiillada colaadeed.
Ismariwaaga udhaxeeya Max'med Xuseen Rooble iyo Farmaajo ayaa salka ku haya hanaanka awoodda wuxuuna khilaafkan sii xoogeystay markii uu taliyihii hore ee NISA Al Shabaab ku nabay kiiska dilkii Ikraan Tahliil oo aheyd Sarkaalad.
Dilka Ikraan ayaa larumeysanyahay in uu mas'uul ka ahaa Fahad Yaasiin waxaana sababta loo dilay lagu sheegay iyadoo haysay malafaatka arrimo xasaasi ah sida dhalinyaradii Ereteriya loo qaaday iyo saraakiil NISA katirsan oo si hoose loo khaarijiyay.
Farmaajo oo safarkii ugu horreeyay ku tagay Itoobiya tan iyo markii ay is qabteen Rooble.